EPL: Arsenal oo guul wayn ka soo gaartay West Ham, kaalinta labaad ee horyaalkana soo gashay, xilli saddexleey uu saxiixay Alexis Sanchez… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Arsenal oo guul wayn ka soo gaartay West Ham, kaalinta labaad ee horyaalkana soo gashay, xilli saddexleey uu saxiixay Alexis Sanchez… + SAWIRRO
Haaruun December 3, 2016
(London) 03 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa soo degtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul wayn oo 5-1 ka soo gaartay West Ham United oo ay booqatay, iyadoo Alexis Sanchez uu saddexleey u dhaliyey Gunners kulankan.
Goolka hore ayey la yimaadeen Gunners, waxaana kubbad uu ka soo shaqeeyey Alexis Sanchez oo ula yimid goolhaya 24’daqiiqo u dhigay Mesut Ozil, kaasoo dhaliyey shabaqa oo furan, kulanka ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Arsenal ayaa la timid goolka labaad waxaana u dhaliyey caawiyaha goolka hore ee Alexis Sanchez, kaasoo baas uu ka helay Shkodran Mustafi la dhex qaaday difaacyada West Ham, sidaasna 72’daqiiqo shabaqa ku hubsaday.
Ciyaarta oo ay 10 daqiiqo ka harsan tahay ayuu Alexis Sanchez dhaliyey goolkiisa labaad ee kulankan iyo goolkii saddexaad ee ciyaarta, waxaana uu ahaa kubbad uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa, kulanka ayaana sidaas ku noqday 3-0 ay ku gacan sarreysay Arsenal.
West Ham United ayaa hal gool la timid waxaana laad xor ah oo birta ku dhiftay 83’daqiiqo Dimitri Payet, madax ku dhammaystiray Andy Carroll, laakiin goolkaas guuldarro kama badbaadin.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa 84’daqiiqo dhaliyey goolka afaraad ee Arsenal, kaddib markii uu laad xooggan ka soo tuuray meel dibadda ka ah xerada ganaaxa kulanka ayaana sidaas ku noday 4-1 ay ku gacan sarreysay Gunners.
Alexis Sanchez ayaa saddexleeydiisa kulankan buuxsaday markii 86’daqiiqo uu dhaliyey kubbad uu goolhayaha ula tagay oo uu ka dul qaaday kulanka ayaana ku soo dhammaaday 5-1 ay guul ku gaartay Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa soo degtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxaana ay leedahay 31-dhibcood, iyadoo saddex dhibcood ka dambeysa kooxda Chelsea oo hoggaanka u haysa horyaalka Ingiriiska.
"1-1 waa natiijo cadaalad ah" - Sergio Ramos oo ka hadlay barbarihii El-Clasico